Blockchain သတင်းများ 11 ဇန္နဝါရီလ 2018 - Blockchain သတင်းများ
Ex-ဘဏ္ဍာရေး Regulator: ငါသတိထားဖြစ်ဖို့လူတိုင်းကိုပြောသည်သောအခါငါ Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြလိမ့်မည်ဟုဆန္ဒရှိ
ဟောင်းများဘဏ္ဍာရေးထိန်းညှိ Bart Chilton သူသတိထားဖြစ်ဖို့လူတိုင်းပြောနေသောအခါသူ Bitcoin နှင့်အခြားလူကြိုက်များ cryptocurrencies ပြန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ဆန္ဒရှိသော်လည်း.
Chilton ကဆဲင်ပြောပါတယ် “ရိုင်းအနောက်” စည်းမျဉ်းအနာဂတ်စျေးကွက်အပြင်ဘက်, ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့စျေးနှုန်းအတက်အကျကတည်းကရှိ Added “ထွက် mellowed ။”
ဂျပန်ရဲ့ Fisco cryptocurrency ရန်ပုံငွေ၏ပစ်လွှတ်ကိုကြေညာ
ဂျပန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသုတေသနကုမ္ပဏီနှင့် Fisco က cryptocurrency ရန်ပုံငွေကိုဖွင့်လိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည် Bitcoin လဲလှယ်အော်ပရေတာ.
ကုမ္ပဏီပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတစ်ဦး Bitcoin နှောင်ကြိုးထုတ်ပေးပြီးနောက်လာမယ့်, အသစ်က crypto ရန်ပုံငွေထက် ပို. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည် 300 သန်းယန်း ($2.66 သန်း) Bitcoin နှင့်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအတွက်, ဂျပန်သတင်းစာ Nikkei အညီ.
အရီဇိုးနားအမတ်များနိုင်ငံသားများ Bitcoin နှင့်အတူအခွန်ပေးဆောင်ခွင့်ပြုပါရန်ဥပဒေကြမ်းမိတ်ဆက်
အဆိုပါအရီဇိုးနားအထက်လွှတ်တော်မယ်ဆိုတာတင်သွင်းအသစ်ဥပဒေကြမ်း, အတည်ပြုလိုက်လျှင်သော်, ကလူ Bitcoin သို့မဟုတ်အခြား cryptocurrencies သုံးပြီးသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်အခွန် liabilities ဆပ်ဖို့ခွင့်ပြု.
ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Warren Petersen တို့ကကမကထပြုသုံးယောက်သည်အခြားအမတ်များကပူးတွဲကမကထ - - ဇန်နဝါရီလအပေါ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပြည်သူ့မှတ်တမ်းများဥပဒေကြမ်းကြောင်းပြသ. 9. ဒါဟာကတည်းကနောက်ထပ်စဉ်းစားများအတွက်အရီဇိုးနားအထက်လွှတ်တော်စည်းကမ်းများကော်မတီရည်ညွှန်းထားသည်.
စာသားအရ, တိုင်း၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟု “တစ်ဦးငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်, ထိုကဲ့သို့သော Bitcoin သို့မဟုတ်အခြား cryptocurrency အဖြစ်, peer-to-peer စနစ်များကို အသုံးပြု.” ပေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက် “အခွန်နှင့်မည်သည့်အကျိုးစီးပွားနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ” ပြည်နယ်အစိုးရမှအကြွေး.
အရီဇိုးနားအမတ်များအတိတ်အတွက်နည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်သောဥပဒေကြမ်းများအတည်ပြုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြ. နောက်ဆုံးနွေဦး, ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ပြည်နယ်ဥပဒေအရတရားဝင်အဖြစ် blockchain လက်မှတ်ပေါင်းနှင့်စမတ်စာချုပ်များကိုအသိအမှတ်ပြုကြောင်းဥပဒေကြမ်းအပြီးသတ်. Gov. Doug Ducey ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လဥပဒထဲသို့အတိုင်းအတာလက်မှတ်ရေးထိုး.
U.S. လေလံပွဲမှ Marshals ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များကို 3,813 Bitcoin
အမေရိကန်. Marshals Service ချွတ်လေလံတင်ရောင်းချပါလိမ့်မယ် 3,813 ဖက်ဒရယ်နှင့် ဆက်စပ်. သိမ်းဆည်းရမိ Bitcoin, လူထုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများတွင်. အဆိုပါဒင်္ဂါးပြားနီးပါးတန်ဖိုးရှိများမှာ $54 လက်ရှိစျေးနှုန်းများမှာသန်း.
ဦးစီးဌာန၏တရားရေးအေဂျင်စီများကအဆိုပါလေလံပွဲဇန်နဝါရီအပေါ်တစ်ဦးခြောက်နာရီကာလအတွင်းရာအရပ်ကိုကြာမြင့်မည်. 22. အဆိုပါ Bitcoin ရောင်းချမည့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လိမ့်မည် 11 လုပ်ကွက်, ဆံ့မည်သည့်၏အကြီးဆုံး 813 Bitcoin. သင်တန်းသားများကိုတစ်သိုက်စေရန်လိုအပ်သည် $200,000, အေဂျင်စီကြေညာချက်ကြာသပတေးနေ့ကပြောပါတယ်.
အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ဆွေးနွေးမှုများ cryptocurrencies တွေ့ဆုံကျင်းပရန်
အမေရိကန်. ဆီးနိတ်လွှတ်တော်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို panel ကို cryptocurrencies ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ရှိုးအန္တရာယ်များကျော်မြင့်တက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြားတွင် Bitcoin ဆွေးနွေးရန်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းစျေးကွက်အားပြိုင်မှုနှင့်အတူလာမည့်လတွင်ကြားနာကိုင်ထားလိမ့်မယ်, ဒီကိစ္စကိုတိုက်ရိုက်အသိပညာနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက Reuters သို့ပြောကြားခဲ့သည်.
အထက်လွှတ်တော်ဘဏ်လုပ်ငန်းကော်မတီဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းတွင်အတွက်ကုန်စည်ဒိုင် Futures Trading ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌခရစ္စတိုဖာ Giancarlo နှင့် Securities and Exchange Commission ဥက္ကဌဂျေး Clayton ကနေသက်သေခံချက်ယူပါလိမ့်မယ်, အရင်းအမြစ်ကပြောပါတယ်.
ရုရှားနိုင်ငံ cryptocurrency ဥပဒေကြမ်း amends: ခွင့်ပြုမှသာလျှင်အတည်ပြုဖလှယ်မှု
ဘဏ္ဍာရေးရုရှားရဲ့ဝန်ကြီးဌာန cryptocurrency တရားဝင်ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုထို့အပြင်စေမည်, သာအချို့အပေါ်ယင်းသို့ပိုင်ဆိုင်မှုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခွင့်ပြုလတံ့သော “အရာရှိ” ဖလှယ်မှု.
လက်ထောက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Alexei Moiseyev RNS ပြောသည်.
တာဝန်ရှိသူတဦးကဖလှယ်မှုများ၏စာရင်းကိုသေးအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ, ဒါဟာနေဆဲဖြစ်နေလို့ပါ “ဆွေးနွေးတင်ပြ”.
Moiseev အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနကလက်ရှိ crypto ငွေကြေးလွှဲပြောင်းကန့်သတ်ချင်ပါဘူးစိတ်ချပါ, ဒါပေမယ့်ထားရန်မျှော်လင့်ထား “မူဘောင်အချို့ကိုမျိုး ".
“အဘယ်သူသည် crypto-ငွေကြေးရှိပါတယ်, အဆိုပါဘာမျှမဖြစ်လိမ့်မည်. သို့သော်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတစ်နည်းနည်းနဲ့စံလိမ့်မည်. အထွေထွေစိတ်ကူးကတာဝန်ရှိသူတဦးကအပြန်အလှန်အပေါ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမဝယ်နဲ့ရောင်းဖို့လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်ကြောင်းနှင့်ဤကြေငြာပါလိမ့်မည်, တရားဝင်။”
Alexey Moiseyev – ဘဏ္ဍာရေးဒုတိယဝန်ကြီး
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဒီဇင်ဘာလအတွင်း Crypto-ငွေကြေးများ၏မူကြမ်းစည်းမျဉ်းပေးအပ် 2017, စာရွက်စာတမ်းဖေဖော်ဝါရီလထဲတွင်ပြည်နယ် Duma တင်သွင်းလိမ့်မည် 2018. ဝန်ကြီးဌာန crypto-ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းယုံကြည်နေ, မရပိုက်ဆံ, နှင့်သတ္တုတွင်း – အထူးအခွန်တွေနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများအဓိပ္ပါယ်အောက်မှာလဲကြ.
Arkansas ပြည်နယ်ကိုပထမဆုံး Bitcoin ATM စက်များရရှိသွားတဲ့
တွင် Arkansas ပြည်နယ်’ အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦပြည်နယ်အတွင်းပထမဆုံး Bitcoin စက်ထိုင်.
စက်မြို့တွင်း Little ကရော့ခ်အတွက် 40-ပုံပြင် Simmons မျှော်စင်၏မြေညီထပ်တွင်ကထောင့် Store မှာနေရာချသောအခါနိုဝင်ဘာလကတည်းကအာရုံကိုဆွဲပိုထားပါတယ်.
“ငါကအတူခြေလျင်အသွားအလာအများကြီးဆည်းပူးင့်,” စတိုးဆိုင်မန်နေဂျာ Connie Davis ကဆိုပါတယ်.
စက်လတ်ြလပ်ခအကြွေစေ့ Inc ကိုကပိုင်ဆိုင်သည်, သော Simmons မျှော်စင်အနီးတစ်ရုံးရှိပါတယ်.
ခရစ် Sweeney, Freedom ကိုအကြွေစေ့ Inc ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်, နှင့် K.C. Surrett, သမ္မတနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်, သူတို့တပ်ဆင်ရန်စီစဉ်ဆိုပါတယ် 10-15 အနောက်မြောက် Arkansas ပြည်နယ်တွင်ပိုမိုစက်တွေ, ခံတပ်စမစ်, Jonesboro နှင့် Arkansas ပြည်နယ်၏အခြားမြို့ပြဒေသများ.
“ငါလူကြိုက်များသဘောတူညီမှုအနာဂတ်ကုန်သွယ်စျေးနှုန်းတည်ငြိမ်ကြောင်းထင်,” Sweeney ကပြောပါတယ်.
“ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ U.S အဖြစ်တရားဝင်ဖွင့်. ငွေကြေးကို,” Duszota ကပြောပါတယ်, ဒေသခံတစ်ဦး Arkansas ပြည်နယ်သည်လူ, အခင်းဖြစ်ပွားရာမှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သူတစ်ဦး Bitcoin ATM စက်များဖောက်သည်.
တောင်ကိုရီးယား: cryptocurrency ပိတ်ပင်ရန်အဘယ်သူမျှမအစီအစဉျမြား
ဒီအပတ်, အတော်ကြာခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာတောင်ကိုရီးယားအစိုးရ cryptocurrency ကုန်သွယ်ပိတ်ပင်ရန်စီစဉ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်. ဒါကအကယ်စင်စစ်အမှုမဟုတ်ပါ, ကအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်ရှေ့တော်၌ထိုဥပဒေကြမ်းကိုပထမဆုံးညီလာခံရှောက်သွားဖို့လိုအပ်မယ်လို့အဖြစ်.
ကဒီဇင်ဘာလကတည်းကပြုတော်မူပြီအဖြစ် 13 ၏ 2017, အဆိုပါတောင်ကိုရီးယားန်ကြီးဌာနမျှသာအချို့ cryptocurrency ဖလှယ်မှုပိတ်ပစ်မယ်လို့တစ်ဥပဒေကြမ်းပြင်ဆင်နေသည်. ဒါဟာရေတိုရေရှည်အတွက် cryptocurrency ကုန်သွယ်ပိတ်ပင်ရန်စီစဉ်မထားဘူး.
တောင်ကိုရီးယားအစိုးရ cryptocurrency ကုန်သွယ်ပိတ်ပင်ရန်ရည်ရွယ်ပါလျှင်, ကဒီဇင်ဘာလအပေါ်ဒီတော့ပွုပါပွီမယ်လို့ 13, အစား cryptocurrencies အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားသားများအပေါ်တစ်ဦးတားမြစ်ချက်ပါဝင်သည့်အမျိုးမျိုးသောစည်းမျဉ်းမူဘောင်လွှတ်၏.
CCN တောင်ကိုရီးယားအစိုးရဇန်နဝါရီနေဖြင့်အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်မျှော်လင့်နေသည်လေးပါးကိုအဓိကစည်းမျဉ်းမူဘောင်ထင်ရှား 20:
– အလွန်အမင်းမတည်ငြိမ်သော cryptocurrencies မှတဆင့်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ထံမှ unaccredited ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတားဆီး.
– unaccredited ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်မှန်းဆပလက်ဖောင်းအဖြစ် operating ထံမှတင်းကြပ်စွာစညျးမဉျြးစညျးကမျး cryptocurrency ဖလှယ်မှုတားဆီး.
– cryptocurrency ဖလှယ်မှုအပေါ်အသက်မပြည့်သေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုမနိုင်ပွင့်လင်းကုန်သွယ်အကောင့်ကိုသေချာစေရန်ဘဏ်များနှင့်ကူးလူးဖလှယ်မှုကိုတောင်းဆို.
– ယာယီ cryptocurrencies ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထံမှအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရပ်ဆိုင်း.
"ကျနော်တို့ကအလားအလာ cryptocurrency လဲလှယ်ပိတ်ပင်ထားမှုအပေါ်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကဲ့သို့တူညီသောအမြင်များကိုမျှဝေကြဘူး,"ဟု MSF ကပြောပါတယ်.
ကွောငျးထငျရှား, အဆိုပါ cryptocurrency ကုန်သွယ်ပိတ်ပင်မှုအဆိုပြုချက်ကိုအဆိုပါတောင်ကိုရီးယားမဟာဗျူဟာဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအားဖြင့်အပြီးသတ်သို့မဟုတ်ပင်အပေါ်သို့သဘောတူညီခဲ့ရသေး.
မာကုကျူးဘားရဲ့ Dallas မြို့ ...
Previous Post:Blockchain သတင်းများ 10 ဇန္နဝါရီလ 2018
Next Post:Bitcoin Hardforks ကဘာလဲ?
အဘယ်အရာကိုတူက Facebook ကိုဗဟိုဦးဦးမည်?
Blockchain သတင်းများ 23 ဇန္နဝါရီလ 2018
Blockchain သတင်းများ 22 ဇန္နဝါရီလ 2018
စတော့အိတ်ခွက်ကို – ဝယ်ယူမှုနှင့်ရောင်းအား၏နံရံများ
Blockchain သတင်းများ 21 ဇန္နဝါရီလ 2018
10 အတွက် crypto စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း 2018
ဇန္နဝါရီလ 23, 2018 admin
Mark Zuckerberg ဟာတစ်ဦးအရင်းအနှီးမှ Facebook ကိုဦးဆောင် $ 538 billion through
ဇန္နဝါရီလ 22, 2018 admin
ယင်းကဘာလဲ “နံရံ” ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတို့အတွက်? Imagine that the purchase